New Day Jobs | How to communicate with difficult people | Career Blogs
Career Advice LandYourDreamJob Workplace Success Workplace Skill 16 Jan 2020
ကျွန်မတို့ နေ့စဉ်လူနေမှုဘဝမှာရော လုပ်ငန်းခွင်မှာပါဆက်ဆံရခက်တဲ့ လူတွေနဲ့ တွေဆုံရလေ့ရှိပါတယ်။ လူမှု့ဘဝ မှာဆက်ဆံရခက်တဲ့ သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံတာက ကိစ္စသိပ်မရှိပေမယ့် နေ့စဉ် အလုပ်လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင် မှာအဲ့လိုဆက်ဆံရခက်တဲ့ လူမျိုးနဲ့ ကြုံတွေ့လာတဲ့အခါ အောက်ပါနည်းလမ်း၉ ခုက သင့်ကို အ ထောက်အကူ ဖြစ်စေမှာဖြစ်ပါတယ်။
၁။ တည်တည်ငြိမ်ငြိမ် နဲ့ဖြေရှင်းပါ။
အလုပ်မှာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးမကောင်းတဲ့သူ၊ သင်နဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာအဆင်မ ပြေတဲ့သူမျိုးနဲ့ကြုံတဲ့အခါ ဒေါသထွက်ပြီး စိတ်လိုက်မာန်ပါ ဖြေရှင်းတာမျိုးမလုပ်ပဲ စိတ်ကိုတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ထားပြီး ဖြေရှင်းပါ။ အလုပ်လုပ်တဲ့ အခါမှာတည်တည် ငြိမ်ငြိမ်နဲ့အလုပ်လုပ်တတ်တဲ့ သူမျိုးကို အခြားသူတွေဆီက လေးလေးစားစားနဲ့ ဆက်ဆံတတ်ပါတယ်။
လူတိုင်းမှာက သင့်ကိုဒုက္ခပေးချင်လို့ကို တမင်ခက်ခဲနေတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။သူက ဘာလို့ ဆက်ဆံရတာ ခက်ရတာလဲ?
လုပ်စရာ ရှိတာတွေကို ပြီးအောင်မလုပ်ရတာလဲ? သင့်နဲ့ အတူတူဘာလို့ တွဲမလုပ်ချင်ရတာလဲ?အဲ့လိုဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းးကို အရင်ဆုံးနားလည်အောင်လုပ်ပါ။ အဲ့ဒါဆိုရင် သင့်အနေနဲ့ ဘယ် အခြေအနေ ကိုဘယ်လိုပြောင်းလဲရမလဲဆိုတာကို သိမှာဖြစ်ပါတယ်။
၃။ တခြားသူတွေဆီကနေ အကြံဉာဏ်တောင်းကြည့်ပါ။
လူတိုင်း သင့်လို အခြေအနေမျိုးကိုကြုံဖူးကျမှာပါ၊ အဲတော့ သင့်ရဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တွေ၊သူငယ်ချင်းတွေနဲ့
မိသားစုဝင်တွေ ဆီကနေ သူတို့တုန်းက ဘယ်လိုဖြေရှင်းခဲ့လဲ၊ သင့် အခြေအနေကိုရောဘယ်လိုဖြေရှင်းသင့်လဲ အကြံဉာဏ် တောင်းကြည့်ပါ။
၄။ တစ်ဖက်လူကိုသင်ဘာကြောင့်လုပ်ရတယ်ဆိုတာကို နားလည်အောင်လုပ်ပါ။
တစ်ခါတစ်လေကျရင် သင့်အခြေအနေကိုတစ်ဖက်လူက နားမလည်ရင်လည်း ဆက်ဆံရေးအဆင်မ ပြေတာတွေ၊ အလုပ်အဆင်မ ပြေတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲတော့ သင့်အနေ နဲ့ သင့်အခြေအနေကို တစ်ဖက်သားနားလည်အောင် ပြောပြပါ။ အရေးကြီးရင်ဘယ်လောက် အရေးကြီးတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်း၊ သင်ဘာကြောင့် ဒါကိုလုပ်လဲဆိုတာကို တစ်ဖက်လူနားလည်အောင် ပြောပြတာကို လုပ်ပါ။
၅။ သူတို့ကို အဆင်ပြေတဲ့နည်းလမ်းနဲ့ ပေါင်းသင်းပါ။
လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမှာEmailတွေ၊Internal messaging app တွေနဲ့ပဲ ဆက်သွယ်တာတွေကို လျှော့သင့်ရင်လျှော့ပြီး ရင်းရင်းနှီးနှီးပေါင်းသင်းဆက်ဆံတာက လဲနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နေ့လည်စာအတူတူစားတာ၊တကယ်လို့သောက်တတ်တဲ့သူမျိုးဆိုရင်အတူတူသောက်တာတို့ကအဖွဲ့တွင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။
ဘယ်သူကမှတော့ချေချေငံငံ၊မလေးမစား ဆက်ဆံတာကို ကျေနပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ သင်က လူတစ်ယောက်ကို မလေးမစားနဲ့ ဆက်ဆံလိုက်မိရင် သင့်ကိုလဲ မလေးမစားနဲ့ ပြန်ဆက်ဆံမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ကိုလေးလေးစားစားနဲ့ ဆက်ဆံတာကို လိုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ သင်ကအရင်ဆုံလေးလေးစားစားနဲ့ဆက်ဆံပါ။ တစ်နည်း အားဖြင့် ဘယ်သူကိုမဆို Respect ထားပြီးဆက်ဆံသင့်ပါတယ်ပေါ့နော်။
တစ်ခါတစ်လေ ဆက်ဆံရခက်တဲလူတွေကြောင့် အလုပ်မှာ ရှေ့မရောက်တော့ပဲ အခြေအနေတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။အဲ့လိုအခါမျိုးရောက်ရင်လည်း အဲ့ဒီ အတွက်ကို ကြိတ်မနိုင်ခဲမရဖြစ်တာ တို့၊ခံပြင်းတာတို့ မကျေမနပ် ဖြစ်တာတို့ အဲ့လိုမျိုး ခံစားနေရတာက သင့်လက်ရှိ အခြေအနေကိုပြောင်းလဲမပေးနိုင်တဲ့အတွက် ပြန်ခံစားမနေပဲ သင့်အနေနဲ့ လုပ်ပေးနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေအပေါ်မှာပဲ အာရုံစိုက်ပြီးလုပ်ဆောင်ပါ။
သင်က အပေါ်မှာပေးထားတဲ့နည်းတွေကို အကုန်အသုံးပြုပြီးတာတောင်မှ ဆက်ဆံရတာခက်နေသေးတယ် ဆိုရင်တော့ နောက်ထပ် နည်းလမ်းက လျစ်လျူရှုခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဘယ်လိုလျစ်လျူရှုမလဲဆိုရင်တော့
သူ့ကို အရမ်းလိုအပ်တော့မှ သူနဲ့ဆက်ဆံပြီး သင်လုပ်စရာရှိတဲ့ အရာတွေပေါ်မှာပဲအာရုံစိုက်ပြီး လုပ်ကိုင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမယ့် သူက လုပ်ငန်းအတွက် အရေးပါတဲ့နေရာကပါဝင်နေတာဆိုရင်တော့ နောက်ဆုံး နည်းလမ်းကိုသုံးသင့်ပါတယ်။
၉။ အထက်လူကြီးကိုတင်ပြပြီး အ ြဖေရှာပါ။
ဒီနောက်ဆုံး နည်းလမ်းကို အပေါ်မှာရှိတဲ့နည်းတွေနဲ့လဲအလုပ်မဖြစ်ဘူး၊ တခြားရွေးစရာ
မရှိတော့ဘူး၊မလုပ်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့မှ ထုတ်သုံးသင့်ပါတယ်။ တချို့လူတွေကအထက်လူကြီးက ပြောမှပဲ အဆင်ပြေတာမျိုးတွေရှိပါတယ်။ သင်က ကိုယ့်ကိုယ်ကို အရင်ဖြေရှင်းပဲ ပြောလိုြက်ခင်းဖြင့် သင့်အထက်က လူကသင့်ရဲ့အသင်းနဲ့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံနိုင်စွမ်းနည်းတယ်လို့ထင် သွားနိုင်တဲ့အတွက် နောက်ဆုံး မဖြစ်မနကျေမှသုံးသင့်တာဖြစ်ပါတယ်။
အထက်ပါ အချက် ၉ ချက်ကိုလက်တွေ့အသုံးချရင်တော့ လုပ်ငန်းခွင်မှာ ဆက်ဆံရခက်တဲ့လူမျိုးတွေနဲ့ တွေ့တဲ့အခါ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဖြေရှင်းနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ပိုမိုကောင်းမွန်သော အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းများကို New Day Jobs မှာ လျှောက်ထားနိုင်ပါတယ်။